Ungasakaza kanjani i-Audio nevidiyo kusuka ku-Linux uye ku-Chromecast | Kusuka kuLinux
Chromecasts Kuba yidivayisi esetshenziswa kakhulu ukudlulisela ku-TV yethu lokho okukhiqizwa kabusha kukhompyutha yethu, iselula noma ngisho nasesipheqululini. Abasebenzisi be-Linux abanakho ukusebenza kwendabuko okusivumelayo sakaza umsindo we-Linux nevidiyo ku-Chromecast, ngakho-ke kufanele sikhethe izicelo ezinjenge mkchromecast, esivumela ukuthi sikudlulise kalula okuqukethwe esifuna ukukubuka kuthelevishini yethu sisebenzisa le divayisi.
1 Yini i-Chromecast?
2 Yini i-mkchromecast?
3 Ungayifaka kanjani futhi uyisebenzise kanjani i-mkchromecast?
4 Sakaza kusuka ku-Youtube uye ku-Chromecast
Iyidivayisi ye-HDMI efana ne-USB drive exhunywe kwi-TV ukuze ibambe isignali evela kumadivayisi we-multimedia axhunywe kwinethiwekhi ye-Wi-Fi. Ngaleli thuluzi singabuka okuqukethwe kwe-multimedia okuthunyelwa kusuka kumakhompyutha ethu, amaselula kanye nakwisiphequluli sewebhu.
Ithuluzi lomthombo ovulekile, elibhalwe ku- Python futhi usebenzisa ini node.js, ffmpego avconv ukuthola umsindo nevidiyo kusuka ku-Linux kuye ku-Chromecast.
mkchromecast ithumela i-multimedia ku-Chromecast yethu ngaphandle kokulahlekelwa ikhwalithi yomsindo nevidiyo, ibuye ihambisane nokusakazwa okuningi, ukulungiswa kwekhwalithi ephezulu ye-24-bit / 96kHz, ukudluliswa okuqondile okuvela ku-YouTube, phakathi kwezinye izinto ezikhona kumamodeli wesimanje e-Chromecast.
Ithuluzi linephaneli elihle kakhulu lokusetshenziswa, eliboniswa ebhokisini lethu lokungenayo. Ngokufanayo, ukufakwa kwe- mkchromecast iqonde cishe kuwo wonke ama-Linux distros.
Ungayifaka kanjani futhi uyisebenzise kanjani i-mkchromecast?
Kunoma iyiphi i-Linux distro singafaka i-mkchromecast ngqo kusuka kukhodi yayo yomthombo ebanjwe ku-Github, ngoba lokhu kufanele senze lezi zinyathelo ezilandelayo:
Shintsha indawo esemthethweni yethuluzi, noma, uma wehluleka lokho, landa inguqulo ezinzile yohlelo lokusebenza kusuka ku- lapha.
Siya kufolda esanda kwakhiwa bese siqhubeka nokwenza ukufaka kwepayipi nefayela requirements.txt equkethe konke ukuncika okudingekayo ukuze ithuluzi lisebenze kahle (kwezinye izimo ithuluzi kumele lisebenze ngeSudo):
Abasebenzisi be-Debia, Ubuntu nabasebenzisi abasuselwa kokunye bangafaka ithuluzi ngqo kusuka ezinqolobaneni ezisemthethweni, vele usebenzise lo myalo olandelayo ovela kukhonsoli:
Ngokwengxenye yabo, abasebenzisi be-Arch Linux kanye nokuphuma kokunye bangasebenzisa iphakethe elitholakala ekhoselweni le-AUR
Singabona ngokuningiliziwe ukusebenza nokusetshenziswa kwalolu hlelo lokusebenza ku-gif elandelayo esatshalaliswa yithimba lezentuthuko. Futhi singabona okokufundisa okusemthethweni okusetshenzisiwe kusuka lapha.
Sakaza kusuka ku-Youtube uye ku-Chromecast
Ikakhulu engikuthandayo ngalolu hlelo lokusebenza ukuthi singadlulisa ngqo ividiyo ye-YouTube kusuka kukhonsoli iye ku-chromecast yethu, ngoba lokhu kufanele senze umyalo olandelayo:
Ngaphandle kokungabaza, ithuluzi elizosivumela ukuthi sithumele i-multimedia yethu kusuka ku-Linux iye ku-Chromecast ngendlela elula, esheshayo futhi ngaphandle kokulahlekelwa ikhwalithi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Ungasakaza kanjani i-Audio nevidiyo kusuka ku-Linux kuye ku-Chromecast
Ngisebenzisa leli thuluzi kakhulu ku-chromecast, livumela ukuthuthuka okuningana ngaphezulu kwalokhu. ungathumela noma yiliphi ifayela levidiyo
ICastnow ingeyokuthumela amafayela evidiyo kuphela, kepha hhayi ukuthumela umsindo ngesikhathi sangempela.
Mkhulu @Lagarto, ngiyabonga.
UCarlos Moreno kusho
Imultimedia ayibonakali ebuningini. Akufanele neze uthi "i-multimedia."
Ngibonga kakhulu ngokucaciswa kwakho othandekayo, ngilungisile futhi ngikhulise izwi lami ngenxa yokubheka kwakho
Kade ngifuna okuthile okufana nezinsuku. Ngiyabonga !!
USenhor Paquito kusho
Kuyathakazelisa. Ngizozama, ngaphandle kokungabaza.
Umbuzo uthi ungayilungisa kanjani i-Firewall. Okwe-Chrome, ngokwesibonelo, angikwazi ukuyilungiselela futhi ngithumela kuphela okuqukethwe (i-YouTube noma yini) nge-firewall ekhutshaziwe.
Ngabe ukhona owaziyo ukuthi angayilungisa kanjani?
Phendula uSenhor Paquito
Uma usebenzisa Ubuntu, lapha ungafunda ukuthi kanjani https://github.com/muammar/mkchromecast/wiki/FAQ#i-am-using-ubuntu-firewall-how-can-i-use-mkchromecast-with-it.
Ngempela, ngisebenzisa Ubuntu (ngiyaxolisa, kepha angizange ngikuqonde ukusho njalo) futhi, kusukela manje kuqhubeke, sengingasebenzisa futhi iChromecast ngaphandle kokuthi ngikhubaze iFirewall.
Ngiphinda ngiphendule, ukukutshela ukuthi ngemuva kokuvula itheku 5000, ngiqale kabusha uma kwenzeka, ngavula i-Chrome futhi ngabona i-Chromecast, yingakho ngicabanga ukuthi itheku lisebenza ezingeni lohlelo nokuthi noma yiluphi uhlelo lokusebenza lungathumela okuqukethwe ku-Chromecast kanye vula.
Kepha ngokuzayo lapho ngiyizama ibingasaxhunyiwe. Kubukeka sengathi okokuqala i-firewall ithathe isikhashana ukuqala, yingakho isebenze okokuqala.
Ngakho-ke ngiyaqonda ukuthi i-port 5000 ingeye-mkchromecast kuphela, akunjalo?
Yebo, ngiyaxolisa. Ngicabanga ukuthi ngifunde okungalungile. Kepha ngombono, akufanele kube nankinga yokuba ne-firewall nokusebenzisa i-chrome. Angizange ngivivinye, ngoba ngisebenzisa iDebian. Futhi yebo, itheku 5000 lidingeka kuphela kwi-mkchromecast.
Mayelana nokufakwa kwe-mkchromecast kusuka kumakhosombe asemthethweni e-Ubuntu, kufanele kuqashelwe ukuthi iphakethe alikho kumakhosombe e-Ubuntu 16.04. Ngokwalokho engikubonile, kubonakala sengathi kutholakala kuphela nge-Ubuntu 16.10.
naku-gentoo distros ??
Angisitholi isisombululo sokungabikho ku-Sabayon Linux yami.